देउवा तनावमा: कोइराला परिवार विकल्प खोज्दै,अब को ?
काठमाडौं, २२ मंसिर । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेसको पक्षमा नतिजा नआउने देखिएको छ ।
कांग्रेसले हार्ने निश्चित देखिएपछि अहिले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नै सभापति देउवाको राजिनामा खोजिने हल्ला चलेको छ । मतगणनाको सुरुआती रुझानले यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्ने र वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने निश्चित भएको छ ।
हुन त कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पहिलो चरणमा भएका ३२ जिल्लामा माओवादी र एमाले नेतृत्वको बाम गठबन्धनले बढी सिट जितेपनि दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ४५ जिल्लामा कांग्रेसको परिणाम राम्रो आउने दाबी गरेका छन् ।
पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए,‘पहिलो चरणमा पक्कैपनि हामीले भनेजस्तो नतिजा आएन, तर हामी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुधार गर्नेछौं।’
यता कांग्रेसभित्रै कोइराला परिवारले नै सभापति देउवाको राजिनामा माँग्ने तयारी गरेको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेताहरु डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला नै टिकट वितरणमा देउवाले गलत गरेको भन्दै सुन्तुष्ट थिएनन् ।
देउवाले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकेको र, सही र योग्य नेताहरुलाई टिकट नदिएको कोइराला परिवारका नेताहरुको आरोप छ ।
देउवा तनावमा: अब कोइराला कि पौडेल ?
काठमाडौं । मतगणनाको सुरुआती हेर्दा नेपाली कांग्रेस भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । कांग्रेसको ओरालो साखले सिंगो नेतृत्व तनावमा परेको छ । पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्दा वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने पक्कापक्की जस्तै छ ।
अब सबैको ध्यान नेपाली कांग्रेसको आगामी भविष्य र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति छ । देउवाले पार्टीको संगठन मजबुत बनाउन नसकेकाले चुनावमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी भइरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वबाट सरकारमा रहेकाहरु अब सिंहदरवारमा पस्न लाज मान्नेछन् ।
कांग्रेसले चुनाव हार्नुको धेरै कारण हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व शैली नै प्रमुख कारण मान्ने धेरै छन् । देउवाको कार्यशैली र संगठनभन्दा बढि नेतृत्वको दम्ब देखाउने प्रवृत्तिले आलोचना बढेको हो । देउवा त तनावमा छन नै ?
अब कांग्रेस नेतृत्व कोइराला कि पौडेल ? बहस सुरु भएको छ । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले तत्कालिन माओवादीसँग दिल्लीमा गरेको १२ सहमतीको बिरोध गर्दा देखिनै पार्टी आरोलो लागेको आंकलन छ ।
त्यसो त कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा जनमत निर्माण गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको मात्रै दोष हुँदैन । सबै नेताले आफ्नो क्षेत्रमा हारको जिम्मेवारी लिनै पर्छ छ ।
तर देउवाकै केही कारणले गर्दा समग्र पार्टी पंक्ति कमजोर भएको भने अवश्य हो । देउवाले प्रधानमन्त्री पदको लोभ नगरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । माओावादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका देउवाले चुनावी नतिजा र एमालेको चलाखी पहिलै आँकलन गर्न सकेको भए कांग्रेस कमजोर बन्ने थिएन ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिन नलगाएर दाहालकै नेतृत्वमा सबै चुनाव गराउन देउवा तयार भएको भए वाम गठबन्धन बन्ने थिएन । तर यो टिप्पणी अहिलेको नतिजापछिको भएकाले यसमा देउवालाई दोषी देखाउनु त्यति उचित नहोला । तर देउवामा दुरदर्शिता भने नभएकै हो ।
अर्कोतिर स्थानीय निकायको चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकामा दाहाल पुत्री रेणु दाहाललाई समर्थन गरेकै कारण पनि देउवाले आलोचना सहनु प¥यो । त्यसैले प्रधानमन्त्री नभएको भए वा दाहाललाई निरन्तरता दिएको भए अनि चुनावमा अपेक्षाकृति नतिजा नआएको भए पनि देउवा नै निशानामा पर्ने थिए ।
तर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा होस वा पार्टीको । दूरदरर्शीता र परिपक्वता देखाउन सकेनन् ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सवालमा पनि देउवा चुके । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई पछाडि राखेर आफू अनुकूल मानिएका जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनउने प्रयास गरे ।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा कांग्रेसले नै लग्यो । त्यसलाई पनि नागरिकले सहजै लिन सकेनन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कार्कीमाथि अनावश्यक रुपमा महाअभियोग लगाउन खोजेको आरोप देउवा माथि लाग्यो ।
राजदुत नियुक्तिमा पनि देउवाले जनमत खस्केला कि भन्नेतिर ध्यान दिन सकेनन् । यसअर्थमा देउवा संगठनभन्दा शक्तिमा बढि केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिएन । पछिल्लो समय आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचार गर्नुबाहेक जनताको मन जित्ने कुनै काम गर्न सकेनन् । त्यसैगरि पार्टी भित्र आरजु भाउजु हावी हुनु र वालुवाटार सिमित घेरामा घेरिनु पनि देउवा र कांग्रेसका लागि प्रतिउत्पादक भयो ।
जे जति कारण भए पनि नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि अहिलसम्मकै कमजोर हैसियतमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । अब कांग्रेसले आफूलाई कसरी मजबुत बनाउने र अर्को पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा पुनः बलियो भएर आउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि देउवाले नेतृत्व छोडेर को अगाडि बढ्ने बहस भइरहेको छ । कोइराला परिवारबाट शसांक ,शेखर ,सुजता पनि एक कित्तामा उभिएइर आफ्नो गुटको उपस्थिती अनिवार्य ठानेकाछन् । त्यसो त यअअघिको महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा पनि आवाज उठ्दै आएको छ ।
अब आजा उठाउने मात्रै होइन, कांग्रेसलाई मजबुत बनाउनका लागि नेतृत्वको बारेमा उचित कदम चाल्नैपर्ने कुरालाई कांग्रेसीजनले बुझ्नु जरुरी छ । त्यसो त देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ नत्र कांग्रेस बलियो बन्नै सक्दनै भन्ने होइन । नेतृत्व परिवर्तन नगरीकन पनि पार्टीलाई सामुहिक प्रयासबाट बलियो बनाउन सकिन्छ ।
अब ५ वर्ष बहुमत पाउने दलले कांग्रेसलाई सत्ता बाहिरै राख्ने अवस्था आउन सक्छ । त्योबेलामा कांग्रेसभित्र नेतादेखि कार्यकर्तामा चरम निराशा र विग्रह आउन सक्छ ।
त्यो बेला देउवाले नैतिकताका आधारमा पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिन्छन् या दिँदैनन् ? त्यो अहिले नै बताउन सकिँदैन । नैतिकताका आधारमा देउवाले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु पर्ने आवाज उठेको छ । विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि एमालेका तत्कालीन प्रमुख माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापतिबाट राजिनामा दिएनन् ।
त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएनन् । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी त हो तर त्यहा आन्तरिक प्रजातन्त्र कति विकास भएको छ त्यो समयले नै बताउला ?
यो पनि पढ्नुहोस् । कांग्रेसका नेताहरु बिच खैलाबैला ! देउवाको खराब बानीले कांग्रेसलाई हानि !!